वालअधिकार दिवस: कानुन एकातिर ‘जसले हानुन् उसैले जानुन्’ अर्कोतिर – Gulmiews
वालअधिकार दिवस: कानुन एकातिर ‘जसले हानुन् उसैले जानुन्’ अर्कोतिर
५ मंसिर २०७३, आईतवार १८:४२ राजु गौतम
मंसिर–५ । आज सदरमुकाम तम्घासमा मनाईएको अन्तराष्ट्रिय वालअधिकार दिवसमा गुल्मीका राजनैतिक दलहरुको अल्छी लाग्दो उपस्थिती देखिएको थियो । वालमन्दिर सभाहलमा आयोजना गरिएको वालअधिकार दिवस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएका दलका नेताहरुको कम उपस्थिती देखिनुले वालवालिकाको कार्यक्रमलाई खासै महत्व नदिएको हो कि भन्ने महशुस हुन्थ्यो ।
कार्यक्रम सुरु भएको धेरै समय बिती सकेपछि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधीत्व गरेर सभाहलको ढोका भित्र खुस्स झुल्कीएका अशोक थापा त्यस पछि देखा परेनन् । त्यसको १५ मिनेट पछि सभाहलमा प्रवेश गरेका नेपाली कांग्रेस सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ भने अगाडीकै सिटमा आशन ग्रहण गरे ।
नेकपा एमालेको प्रतिनिधीत्व यो पंक्ति कोर्ने बेला सम्म देखिएको थिएन् । अन्य साना ८ दलको पनि निकै अवेर सम्म प्रतिक्षा गर्दा पनि नाख मुख देखिएन ।
वालवालिकाको सहभागिताका रुपमा विद्यालय डे«शमा चिटिक्क परेका सुकीला मुकिला भाई वहिनीहरुको मात्र उपस्थिीत देखिन्थो । सभाहल वाहिर धुलै–फुर्सै , भोका नाङ्गा वालवालिकाहरुलाई वालअधिकार दिवस कुन चरीको नाम हो ? भन्ने अनविज्ञता छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्थ्यो ।
त्यहाँ वालवालिकाहरुका नेता नेतृहरुले आफुहरुको पक्षमा धेरै कुरा उठाए । शिक्षा, स्वास्थ्य आदि ईत्यादी धेर विषय विषय उठाईयो । तर सामन्य पौष्टीक आहरा नपाएर कुपोषणको शिकार भएका, जाडोमा न्यानो कपडा नपाएर विभिन्न रोगले ग्रस्त भएका वालवालिकाहरुको कुरा उठेन् ।
जिल्ला वाल सञ्जालका अध्यक्ष विकास तामाङ्गको भाषण चर्को थियो । उनले स्कुल प्रवेश गरेका वालवालिकाहरुको विषयमा निकै आवाज उठाए । तर आर्थिक अवस्थाका कारण र अभिभावकको अभावमा स्कुल प्रवेश गर्नबाटै बञ्चित भएका वालवालिकाहरुको विषय उनले पनि उठाउन विर्से ।
वालअधिकार सम्पन्न परिवारका वालवालिकाहरुलाई अभिभावकले आफै उपभोगको तह सम्म पुराएका छन् । तर गरिव निमुखाका सन्तानहरुलाई वालअधिकारको वारेमा बढि नै प्रशिक्षित गरिनु पर्ने हो र राज्यबाट प्राप्त सुविधा केहि छन भने दिलाउनमा सरोकारवालाको ध्यान पनि उनिहरु तर्फ जानु पर्ने हो ।
गरिव निमुखाहरुको कुरा छाडौं । कतिपय कलंकित आमाहरुबाट वेसहारा बनेका वालवालिकाको कुरा गर्ने हो भने अवस्था निकै दयानिय छ र गम्भीर पनि छ । विचरा ६ महिना सम्मका दुधे वालवालिकालाई समेत चटक्क छाड्दै र विदेशमा रहेको श्रीमानलाई विल्लीवाँठ पार्दै दोश्रो विवाह गरेर भाग्नेहरुले वालअधिकार हनन् गराउने कुरमा ठुलो खलनायिकपन देखाउँदै आएका छन् ।
भागेको एकादुई वर्ष पछि कतिपयले बल्ल त्यही सन्तान प्यारो लागेको भन्दै गोहीका आँशु बगाउन आएर मुद्धा मामिला गरेर सास्ती दिन्छन् । कतिपय आमाहरुले वावु नभएको वेला अंकल हो भन्दै कोखैमा सुताएर छोरा छोरीहरुलाई यौनिक कृयाक्लावको वच्चै देखि ज्ञाता बनाउँछन ।
कुनै आमाहरुले समाजमा हाकीदाउँ दोश्रो विवाह गरेर पनि अदालतलाई उल्लु बनाउन भ्याएका छन् । चिची पनि पाप पनि हाता पार्न सफल बनाएको छ नेपालको कानुनले कतिपय कलंकित आमाहरुलाई । उता दोश्रो संग विवाह गरेको पक्कै हो तर कति गजव ? महिलाले र त्यो दोषि पुरुषले पनि हो नभने सम्म दैनिक उनिहरु संगै बसे खाए पनि दिलाउन सक्दैन् कानुनले । त्यही कारणले पनि नयाँ श्रीमानबाट चिची , पुरानो श्रीमानबाट पाप खाना लाजै मानेका छैनन् कतिपयले ।
अर्को कुरा समाजको वास्तविकता यो हो कि बकैदा माथीघरे ठुले वा तल्ला घरे साने उसको श्रीमान विदेश गएको बेला दैनिक रातीमा आउछ र उज्यालो नहुँदै वाहिरिन्छ । त्यो देख्ने कुनै एक जना छैनन् धेरै पँधेर्नीहरु र शौचालय जान निस्केका सेतै फुलेका वाजे र वजै पनि छन् । तर कानुन पछिको अधिवत्ते फट्याई यस्तो छ त्यसवारे मुख खोले उल्टै मानहानीको मुद्धामा जाक्कीने डर छ ।
त्यसैले त रंगेंहात समाते पनि कसैले केहि माखो मार्दैनन् । आउ कानुनले दिएको मौकाको चौका हानौं भन्ने प्रोत्साह बढेको छ समाजमा । नेटा गाविसमा एक डेढ वर्षको सन्तान छाड्दै र विदेशमा रहेका श्रीमानलाई घात गर्दै हिडेकी एक महिलाले चाउरी परेका गालामा क्रिम घस्न र ओठमा लाली रन्काएर बैश देखाउन पनि लाज मानेकी छैनन् ।
ईस्मातिरको ववाल पनि स्थानियलाई थाहै होला । क्षेत्र नम्वर २ र १ पनि त्यसबाट अछुतो रहनै सकेन । विषय गम्भीर बन्दै गएको छ । आमाविहिन पाईला सार्ने उमेरका वालवालिकाहरु कसैको घरमा गोठालो बस्न त कोही होटलको जुठा भाँडा माँझ्न बाध्य छन् । कुमारी आमा बनेर बसेका दलित महिलाहरुले छोरा छोरी पढाउन सकेका छैनन् ।
हामी सदरमुमकाममा बस्नेहरुले वर्षेनी वालदिवस , अधिकार दिवस आदी मनाउँदै आएका छौं । यस्ता विषयको गहिराईमा पुग्ने हो भने दिवस मनाउनुको औचित्य नहुन सक्छ । यसर्थ त्यस्ता कलंकित पात्रको सभाहलमा नाम लिन प¥यो । कति छन त त्यस्ता कलंकित आमाबाट वेवरिसे बनेका वालवालिकाहरुको संख्या र अवस्था ? त्यसको तथ्याङक सरोकारवाला संघले पस्कीन सक्नु प¥यो । तर सरकारी निकाय महिला तथा वालवालिका कार्यालयमा समेत छैन् ।
सायद अव बेलैमा बुद्धि पुराउन सक्यो भने कुनै एनजियो आईएनजीओले महकाड्न सक्छ र महकाड्नेले हात चाट्न पनि सक्छ । दर्लिङ्गको दुनाम गाउँ, नेटाको लिलिङ्ग गाउँ जस्ता विकट गाउँहरुमा जानुहोस यो जाडोमा वालवालिकारुले स्याहर सुसार नपाउँदा हात खुट्टा चिराचिरा परेका छन् । शरिर त्यस माथी लगाईएका कपडा कलेटी परेका छन् । सायद उनिहरुले वर्षको एकचोटी पनि शरिरमा पानी हाल्न पाएका छैनन् ।
वावु आमा उज्यालो नहुँदै अर्काको हलोकोदालो समात्न नहिडे भरै चुलो बल्दैन । त्यसैले पनि उनिहरु समेत मुखै नधोई काममा जान्छन र साँझ अवेर घर छिर्नन् । उनिहरुका वालवालिकाको पढाई कस्तो भयो ? उनिहरुले वालअधिकार उपभोग गरेका छन कि छैनन् ? भनेर अनुगमन गर्ने निकाय खै ? अनुगमन त परै जाओस् गाउँका कुनै औपचारिक कार्यक्रममा पुगेका जिल्लाका ठुलाबडाहरुको नजर समेत उनिहरु माथी परेको पाईदैन् ।
अधिकांस हेर्ने हो भने वालअधिकार हनन् गराउने पहिलो पात्र बुढो वैशले थामी नसक्नु बनेकी महिला र दोश्रोमा पुरुष पात्र बनेको देखिन्छ । जसले आफ्ना सन्तानलाई त ज्युँदै मारेको छ । त्यसका अलवा उसको पुर्व श्रीमानलाई बौलाएर हिड्ने बनाएको छ । अनि समजालाई हाड नाता सम्मको जिउरो टोकाईमा पारेको छ ।
भतिजो भन्नु छैन् । देउर जेठाजु भन्नु छैन् , नजिकको ससुरो भन्नु छैन् । त्यो भतिजो भनौं , देवर र जेठाजु भनाउँदोले पनि आमा तुल्य हुन भन्न सक्दैन । यस्तो प्रवृद्धिले समाज विकृतिको दलदलमा फस्दै छ र त्यस्ताले जन्माएका वालवच्चाहरु सामन्य एउटा खाना पाउने मौलिक अधिकारबाट समेत बञ्चीत हुनु परेको छ ।
महिला फँसाउनमा र बिगार्नमा पुरुष पक्कै दोषी होला । यदि महिला सचेत हुन्छन भने , कुनै पुरुषले जवरजस्ती गर्न खोजे गुहार माग्न सक्छिन् । भाग्न सकिन्छ र चिच्चाए गुहार पनि पाईन्छ । त्यसो गरे त्यो पुरुषले कुनै पनि हालतमा शाहस गर्न सक्दैन । जव सुरुमा महिलाले सिधै यौन अपिल गर्छे , घरमै बोलाउछे भने किन विकृति बढ्दैन् ? कतिपय घटनाको वास्तविकता यस्तो पनि भएको पाईन्छ कि पहिला वोलाउने पात्र महिला नै हो तर जव कसैले थाह पाए भने गुहार… गुहार वचाउ…वचाउ… जवरजस्ती गर्न आयो भनेर चिच्चाउने पनि पहिला उनै महिला भएको …. झोलमा डुवेर मर्ने श्रोतले बताएको छ ।
यस्तो घात प्रतिघातमा परेर कतिपय पुरुष जेलको चिसो खान समेत बाध्य भएका कैयौ घटना यो देशमा छन् । आफैले जन्म दिएको वाउले वलात्कार ग¥यो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिन यसै सदरमुकाम तम्घास नजिकैकी एक युवती आईन् ।
पछि बुझ्दै जाँदा र स्वयमले पनि वास्तविकता उजागार गर्दै जाँदा अखिार वावु र श्रीमान अनाहकमा फँसाउनका लागि आमा छोरीले षडयन्त्र गरेकोछन् । पछि आफै माफी मागेर फर्किए ।
क्षेत्र नम्वर ३ मा पनि एक जनालाई विना कशुर बलात्कारको मुद्धामा फँसाउने काम भएको स्थानियले बताउँ छन् । कतिपय महिलाहरुका लागि के अस्मीता रिस फेर्ने हतियार र मागी खाने भाँडो हो ? यदि त्यस्तो हो भने सिधै हानेको बरु दुख्दैन आउ खुलेर हान लुकेर नहान ।
लुकेर हानेकोले सधै दुखि रहन्छ पोलि रहन्छ । यसको मतलव देह व्यापारी नै हौं भने खुलेर आउ । नत्र स्वाङ्ग पार्दै भ्वाँङ्ग नपार । तिमिले कसैको जिवनमा एक चोटी पारेको भ्वाङ्गले सधैका लागि उ भास्सीएको छ ।
थाह छ ? तिमीले हुर्के देखि विवाह नहुनु पुर्व सम्म कतिवटा शिशु हत्या गरेर माटोमा पुरेर हिड्यौं ? अर्को पटक तिमीले जन्माएर गाँजमा फालेको शिशुलाई च्वाँच्वाँ रुदै गरेको बेलामा समेत कुकुरले गाउँमा डुलाएर हिड्यो , कि होईन ? यस्तो सोध्ने पात्र धेरै जनाका धेरै रुष्ट पुर्व प्रेमीहरु रहेका हुन्छन् ।
यौन काण्डमा समाजको वास्तविक पिडक र पिडित जोख्ने तराजु हुने हो भने पुरुष महिलामा दोषी बिसका उन्नाईस विरलै पाईएला । कुनै एक उन्नाईस छैनन् । दुवै विसका–विस , पछि आरोप यस्तो आउँछ ‘म होईन दोष्ी तँ थिईस् । ’ कतिपय घटनाको वास्तविकता यस्तो छ । कानुन उस्तो छ । यसर्थ जसले हान्यो उसैले जान्यो भएका छन कतिपय भने कतिपय पुम्पुरोमा हात समाउने भएका छन् ।
अन्र्राष्ट्रिय वालअधिकार दिवस मनाई रहेको सन्दर्भमा यस्ता विषयहरुलाई पनि उठान गर्दा ति वेवरिसे वालवालिकाहरुको पनि उद्धार हुन्थ्यो कि भन्ने प्रयास हो र उमेर २० नपुग्दै ३० शिशुको हत्या गर्ने खेलोखेती पनि कुमारी आमाबाट रोकिन्थ्यो कि भन्ने जमर्को हो । कृपया ठ्याक्कै मेलाखाने चरित्र भएकी पात्रज्यु, कृपया रिसानी माफ होला……………………